Germany - Chọpụta obodo ndị kachasị dị na nkuku ndị ọzọ | Njem zuru oke
Germany bu obodo nke Europe na isi obodo ya bu Berlin. Na ihe karịrị nde mmadụ iri asatọ na atọ bi na ya, ọ bụ otu n’ime obodo ndị kacha biri na European Union. N'ikwu okwu sara mbara, anyị hapụrụ ya na ọ bụ mba nwere ọnọdụ obibi ndụ dị elu yana ọ pụtara ìhè n'akụkụ ụfọdụ dị ka teknụzụ na sayensị.
Ọ nwere akụkọ ihe mere eme dị ogologo n'azụ ya na ọ bụ ruo na narị afọ nke XNUMX ka a na-ekwu banyere Germany n'ezie dị ka steeti. N'ịhapụ akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, anyị hapụrụ ihe niile ọ na-ahapụ anyị n'akụkụ nke ọ bụla, nke na-adịghị ole na ole. Ọ nwere nnukwu ngwakọta nke ụdị dị iche iche n'etiti ihe owuwu ya, ihe na-apụ apụ mgbe niile. Yabụ, otu n'ime nleta ndị mbụ ga-abịa na Castle Neuschwanstein, nke dị na Bavaria na ọ bụ otu n'ime isi mpaghara anyị na-ekwesịghị ịhapụ. Ma Munich ma ọ bụ ebe akụkọ ihe mere eme ya ma ọ bụ mpaghara Halllọ Nzukọ Alaeze. Na-agafe Bremen na Dresden.
Anyị ekwuola ya na nke ahụ bụ na Berlin na-enyekwa anyị ohere ịnụ ụtọ ọnụ ụzọ Brandenburg ma ọ bụ Mgbidi na Katidral Berlin. Ihe nnọchianya ndị na-abụkarị ndị protagonists na njem anyị. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnọ jụụ na ịkpọtụrụ okike, echefula Selva Negra. Oke ohia puru iche! Obí eze, obí na echiche pụrụ iche, ị ga-ahụ ha na ihe akpọrọ ''zọ ịhụnanya'.
Owuwe Ihe Ubi a ememme graces nke sitere n'oge ndị ọgọ mmụọ
por Luis Martinez eme Ọnwa 10 .
Ememme owuwe ihe ubi bụ ememme ekele gbasaruru ụwa niile. Mbido ya laghachiri na ...
Kedu ihe ị ga-ahụ na Munich?
por Luis Martinez eme Ọnwa 12 .
Kedu ihe ị ga-ahụ na Munich? Ọ bụ ajụjụ a na-ajụ onye na-eme atụmatụ njem na Bavaria, steeti German nke ...
por Susana godoy eme 2 afọ .
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, isi obodo Germany nwere ọtụtụ ihe na-enweghị njedebe. Ọ bụ ya mere na mgbe anyị ...
Ndị kasị mma ochie ochie obodo na Europe
por Berkwụ Alberto eme 2 afọ .
Ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme na-achọta oge ochie, ma ọ bụ nke dị n'etiti oge, oge kachasị ...
Oberammergau bụ obodo na Bavaria, Germany. Nwere ike ịchọta ya na ndagwurugwu nke osimiri Ammer, maka ...
Mad King's Castle: Mgbe Germany kpaliri Disney
por Berkwụ Alberto eme 3 afọ .
Ọ bụrụ na ị gaa ogige ntụrụndụ Disney, ị ga-amata ozugbo nnukwu ụlọ pink ahụ sitere na Mma Ihi ụra. Otú ọ dị,…
Berlin na ụbọchị 3
por Susana godoy eme 3 afọ .
Anyị na-aga isi obodo Germany. Berlin bụ otu n'ime obodo kachasị biri na Central Europe. Ọ dịkwa mkpa ...
N’ebe ndịda Bavaria, na Germany, anyị hụrụ Nnukwu Castlọ Neuschwanstein. O doro anya na ọ bụ otu n'ime isi ihe ...
por maruuzen eme 5 afọ .
Lọ ndị a na-agbachitere oge ochie nke ụlọ ọrụ ọdịnala agbanweela na ụlọ ịhụnanya, akụkọ ifo. Kedu…
Kporie nri ndị anaghị eri anụ na Germany
por Ezigbo Germany eme 9 afọ .
Enwere ọtụtụ ndị njem na-aga Germany na ebumnuche itinye ụfọdụ jụụ ma na-atọ ụtọ ...
Uwe ejiji German: Lederhosen na Tracht
Agbanyeghị na German anaghị egosipụta ezigbo ejiji, ejiji ndị mmadụ na uwe ọdịnala na-atọ ya ụtọ na-enweghị ...